ဒူးနာ၊ခြေဆစ်နာနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ တတ်သူများစားသုံးပေးသင့်တဲ့ ခရမ်းသီး မီးဖုတ် – Cele Lover
ဒူးနာ၊ခြေဆစ်နာနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ တတ်သူများစားသုံးပေးသင့်တဲ့ ခရမ်းသီး မီးဖုတ်
ဒူးနာ၊ခြေဆစ်နာနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ တတ်သူများအတွက် ခရမ်းသီး မီးဖုတ် ကို စားသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းလေး မျှဝေချင်ပါတယ်။ဒူးနာ၊ခြေဆစ်နာနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲနာတာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ အစာအာဟာရဖြစ်သလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးလည်းမရှိပါဘူး။ခရမ်းသီးဟာ နေရာဒေသမရွေး အလွယ်တကူဝယ်ယူစားသုံးလို့ရတဲ့ အသီးဖြစ်သလို ကျန်းမာ ရေးကိုလည်း လွန်စွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ကို သုပ်တာကတော့ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မိမိ နှစ်သက်သလိုသာ သုပ်စားကြပါ။ခရမ်းသီးကို ဒူးနာ၊ ခြေဆစ်နာနဲ့ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲသူတွေ အနည်းလေး တစ်ပတ်သုံးကြိမ်လောက် မှီဝဲသင့်ပါ တယ်။တကယ်လို. သင့်မှာ အ‌ရေပြားဝေဒနာရှိနေရင်တော့ မစားပါနဲ့။ ပိုပြီး ယားယံတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
ဒူးနာ၊ေျခဆစ္နာႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲ တတ္သူမ်ားစားသုံးေပးသင့္တဲ့ ခရမ္းသီး မီးဖုတ္
ဒူးနာ၊ေျခဆစ္နာႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲ တတ္သူမ်ားအတြက္ ခရမ္းသီး မီးဖုတ္ ကို စားသုံးသင့္တဲ့ အေၾကာင္းေလး မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္။ဒူးနာ၊ေျခဆစ္နာႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲနာတာေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ အစာအာဟာရျဖစ္သလို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဴးလည္းမရွိပါဘူး။ခရမ္းသီးဟာ ေနရာေဒသမေ႐ြး အလြယ္တကူဝယ္ယူစားသုံးလို႔ရတဲ့ အသီးျဖစ္သလို က်န္းမာ ေရးကိုလည္း လြန္စြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။
ခရမ္းသီးမီးဖုတ္ကို သုပ္တာကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ မိမိ ႏွစ္သက္သလိုသာ သုပ္စားၾကပါ။ခရမ္းသီးကို ဒူးနာ၊ ေျခဆစ္နာနဲ႔ အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲသူေတြ အနည္းေလး တစ္ပတ္သုံးႀကိမ္ေလာက္ မွီဝဲသင့္ပါ တယ္။တကယ္လို. သင့္မွာ အ‌ေရျပားေဝဒနာရွိေနရင္ေတာ့ မစားပါနဲ႔။ ပိုၿပီး ယားယံတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
Previous Article စစ်တပ်ကို သာ အပြည့်အဝထောက်ခံပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှဂရုမစိုက် ကြော င်းအတိအလင်းပြောလိုက်တဲ့ဒိန်းဒေါင်ရဲ့(ရုပ်သံ)
Next Article လေဖြတ်လူနာတောင်၂ ပတ်အတွင်း လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်း